नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने ११ जना कहाँका थिए ? - NA MediaNA Mediaनेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने ११ जना कहाँका थिए ? - NA Media
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ११ जनाको ज्यान गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हालसम्मको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा २ वर्षीया बालिका, २९ वर्षकी महिला र १८ वषदेखि ७० वर्ष उमेर समूहका पुरुष रहेका बताए । ती सबैको जेठ १ गतेदेखि यता मृत्यु भएको हो ।
कोरोनाबाट कहिले कति जनाको मृत्यु भयो ?
गत जेठ १ गते नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमण २९ वर्षीया सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको थियो तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उनको मृत्यु जेठ ३ गते घोषण गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार काठमाडौंको टोखा ९ बस्‍ने ती महिला वैशाख २३ मा महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डेलिभरी हुन भर्ना भएकी थिइन् ।
उनले वैशाख २४ गते शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । अस्पतालले उनलाई वैशाख २५ गते डिस्चार्ज गरेको थियो । तर, डिस्चार्ज भएर घर गएपछि उनलाई ज्वरो आउने र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको थियो । तर, त्यहाँबाट उनलाई कोरोना भाइरसको आशंकामा धुलिखेल अस्पताल पठाइयो । अस्पताल ल्याउँदै गर्दा जेठ १ गते उनको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो ।
त्यसैगरी, बाँके नरैनापुर ५ का २५ वर्षका पुरुषको पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गत जेठ ४ गते (आइतबार) मृत्य भएको थियो । उनलाई जेठ ३ गते रातिदेखि ज्वरो आउने र झाडापखालाको समस्या देखिएको थियो । ४ गते बिहान ६ बजेर ४० मिनेट जाँदा मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । वैशाख ३० गते ती पुरुष भारतबाट आएका थिए। उनी नरैनापुर गाउँपालिका ५ स्थित भोज भगवानपुरस्थित क्‍वारेन्टाइनमा रहेका थिए । तर, उनको स्वाब संकलन गरेर भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको स्वाब परीक्षणमा उनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । तर, सोही दिन दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनको संक्रमणबाटै मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो ।
गुल्मी मदाने गाउँपालिका ४१ वर्षका पुरुषको जेठ ८ गते कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ती व्यक्तिलाई ज्वरो र जन्डिस देखिएपछि गत जेठ १ गते रुपन्देहीको मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा भर्ना गरिएको थियो । अस्पतालले ती व्यक्तिको स्वाब संकलन गरेर जेठ २ गते भैरहवा अस्पतालको प्रयोगशालामा पठाएको थियो । उनको जेठ ५ गते कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने तेस्रो व्यक्ति थिए ।
जेठ ४ गते बारा कलैया ७ का ७० वर्षका पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ती पुरुषको नेसनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । जेठ ३ गते नारायणी अस्पतालको टोलीले स्वाब संकलन गरे नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो । त्यहाँ कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि थप परीक्षण गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएको थियो । जेठ १२ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले पुष्टि गरेका थिए । ती ७० वर्षका जेठ नागरिक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने चौथो व्यक्ति हुन् ।
त्यस्तै, ललितपुर महानगपालिका बुङमतिका २२ का ५६ वर्षका पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ती पुरुषको जेठ १४ गते ग्वार्कोस्थित किष्ट अस्पतालमा उपचाररत रहँदा मृत्यु भएको थियो ।
उनी कलेजोसम्बन्धी समस्या देखिएर जेठ ११ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । जेठ १२ गते आईसीयूमा सारिएको थियो । सोही दिन नमुना संकलन परीक्षणका लागि पठाएको थियो । उनलाई कोरोना पोजेटिभको रिपोर्ट जेठ १४ गते आएको थियो । तर, मन्त्रालयले १५ गते ती पुरुष कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । उनी कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने पाँचौ व्यक्ति हुन् ।
भूमिकास्थान नगरपालिका अर्घाखाँचीका ३५ वर्षका पुरुषको जेठ १० गते मृत्यु भएको थियो । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ती पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जेठ १६ गते जानकारी दिएको थियो । भारतबाट आउने क्रममा उनको सीमामा मृत्यु भएको थियो । उनको स्वाब जेठ ११ गते संकलन गरेर रुपन्देहीको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । उनको कोरोना परीक्षणको रिर्पोटमा पोजेटिभ देखिएको थियो । उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने छैटौं व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका ७ का ३५ वर्षका पुरुषको जेठ १७ गते ज्यान गयो । उनी भारतबाट आएर स्थानीय विद्युत प्राधिकरणको क्‍वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उनको क्‍वारेन्टाइनमै मृत्यु भएको हो । ती पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ १८ गते अर्थात् मृत्यु भएको दोस्रो दिन मात्र जानकारी दिएको थियो । उनी कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने सातौं व्यक्ति थिए ।
बाजुराकी २ वर्षकी बालिकाले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाइन् । उनी जेठ १० गते भारतबाट बुबाआमासँग नेपाल आएकी थिइन् । उनी स्थानीय क्‍वारेन्टाइनमा बसेकी थिइन् । ती बालिकालाई क्‍वारेन्टाइनमा रहँदा ज्वरो स्वासप्रश्वासमा समस्या र झाडापखाला देखिएको थियो ।
उनलाई जेठ १५ गते बाजुरा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । १६ गते स्वाब सेती प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । जेठ १८ गते बिहानै २:२३ मा ती बालिकाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो । उनको कोरोना परीक्षणको रिर्पोट पनि पोजेटिभ आएको जेठ १८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । ती बालिका कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने आठौं थिइन् ।
दोलखाका ७६ वर्षका पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । जेठ १३ गते सिनांमगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा मस्तिष्कघात भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
उनको स्वाब झिकेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । उनको मस्तिष्कघातको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनको १५ गते कोरोना परीक्षणको रिर्पोट पोजेटिभ आएको थियो । थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । सोही अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको थियो । ती पुरुषको जेठ २१ गते ज्यान गएको थियो ।
जेठ २० गते पाल्पाका ४५ वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको थियो । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका मिसन अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको थियो । उनी भारतबाट गत जेठ १५ गते आएका थिए । स्थानीय क्‍वारेन्टाइनमा रहेका उनमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएको थियो । उनलाई जेठ १८ गते पाल्पाको मिसन अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको मृत्यु कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नै भएको जेठ २२ गते मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिएका थिए । उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने १० औँ हुन् ।
सुर्खेत पञ्चपुरीका १८ वर्षका युवकको जेठ २२ गते मृत्यु भएको थियो । जेठ आठ गते भारतबाट नेपाल आएका उनी १४ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उनलाई क्‍वारेन्टाइनमा बस्दा कुनै संक्रमणको लक्षण देखिएको थिएन । घर जानुभन्दा अघि उनको क्‍वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आरडीटी परीक्षण गरेका थिए । त्यसमा नेगेटिभ रिपोर्ट देखिएपछि घर गएका उनको सोही दिन मृत्यु भएको हो । योसँगै कोरोना पोजेटिभ भएर मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ ।